Black Man English Lesson (mmsub)
(21+) Black Man English Lessonမွနျမာစာတနျးထိုး
------ ------- -------- ------- -
JAV မငျးသမီးခြောလေးတှကေ အငျမတနျမှ အနုအရှကွိုကျပွီး အသညျးယားအောငျ ညုတကျတယျဆိုတာ ပုရိသတို့အသိပါပဲ..သူတို့ရဲ့ Cute ဖွဈတဲ့ မကျြနှာလေးတှရေယျ အလနျးစား ခန်ဓာကိုယျလေးတှရေယျက မွငျရသူအပေါငျး ဘဝငျခိုကျစပေါတယျ...JAV မလေးတှရေဲ့ ဘကျက ပွညျ့စုံသလောကျ Actor တှဘေကျကတော့ မွငျတှနေ့ရေတဲ့အတိုငျးပါပဲ…..ခံစားရတာ မပွညျ့စုံလှပါဘူး “ခါခဉျြကောငျ တောငျဖွိုခငျြပမေဲ့ ခါးကမသနျ” ဆိုသလိုပါပဲ… ခံစားမှုရသတဈမြိုးထူးခွား ပေးမယျ့ ရသမွောကျကားလေး အခုပဲတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
International တနျးဝငျ JAV အခြောမလေးရဲ့ အယုအယတှနေဲ့ လူမညျး ထှားထှားကွိုငျးကွိုငျးတို့ အပွိုငျလှနျဆှဲခနျးတှဒေီဇာတျလမျးမှာတဝကွီး တှရေ့တော့မှာပါ…..ခတျေကွီးက Globalization ဖွဈလာတာနဲ့အမြှ အင်ျဂလိပျစာက အခရာကလြာပါတယျ...ခတျေအမွငျရှိလှတဲ့ ဆာနာရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူဟာ ဇနီးသညျကို သတငျးစာမှတဆငျ့ကွငွောတငျထားတဲ့အင်ျဂလိပျစာသငျတနျးတဈခုကို တကျခိုငျးပါတယျ…သငျတနျးဆရာကတော့ ရောဘတျလို့ချေါပါတယျ,...သူကတော့ စာသငျတာတျောပမေဲ့ မိနျမကိစ်စမှာ အလှနျပှရှေုပျတဲ့လူမညျးတဈယောကျဖွဈနပေါတယျ…အဲဒါကိုမသိပဲ နာဆာရဲ့ ခငျပှနျးက နာဆာကို အတငျး သငျတနျးတကျစခေဲ့ပါတaယျ….
ဒါပမေဲ့ သူသိတဲ့အခြိနျမှာတော့ နောကျကခြဲ့လပွေီ…ရောဘတျ တယောကျအင်ျဂလိပျစာကို ဘယျလိုသငျပေးမလဲဆိုတာ အခုပဲ ဒေါငျးသာကွညျ့လိုကျတော့ဗြာ…..…..ကြောကျသငျပုနျးဆိုတာ မွဖွေူနဲ့ရေးမှ ထငျးခနဲ ကှငျးခနဲ မွငျရတာ…
(21+) Black Man English Lessonမြန်မာစာတန်းထိုး
JAV မင်းသမီးချောလေးတွေက အင်မတန်မှ အနုအရွကြိုက်ပြီး အသည်းယားအောင် ညုတက်တယ်ဆိုတာ ပုရိသတို့အသိပါပဲ..သူတို့ရဲ့ Cute ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာလေးတွေရယ် အလန်းစား ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေရယ်က မြင်ရသူအပေါင်း ဘဝင်ခိုက်စေပါတယ်...JAV မလေးတွေရဲ့ ဘက်က ပြည့်စုံသလောက် Actor တွေဘက်ကတော့ မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲ…..ခံစားရတာ မပြည့်စုံလှပါဘူး “ခါချဉ်ကောင် တောင်ဖြိုချင်ပေမဲ့ ခါးကမသန်” ဆိုသလိုပါပဲ… ခံစားမှုရသတစ်မျိုးထူးခြား ပေးမယ့် ရသမြောက်ကားလေး အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
International တန်းဝင် JAV အချောမလေးရဲ့ အယုအယတွေနဲ့ လူမည်း ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းတို့ အပြိုင်လွန်ဆွဲခန်းတွေဒီဇာတ်လမ်းမှာတဝကြီး တွေ့ရတော့မှာပါ…..ခေတ်ကြီးက Globalization ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ အင်္ဂလိပ်စာက အခရာကျလာပါတယ်...ခေတ်အမြင်ရှိလှတဲ့ ဆာနာရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ဇနီးသည်ကို သတင်းစာမှတဆင့်ကြေငြာတင်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတစ်ခုကို တက်ခိုင်းပါတယ်…သင်တန်းဆရာကတော့ ရောဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်,...သူကတော့ စာသင်တာတော်ပေမဲ့ မိန်မကိစ္စမှာ အလွန်ပွေရှုပ်တဲ့လူမည်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်…အဲဒါကိုမသိပဲ နာဆာရဲ့ ခင်ပွန်းက နာဆာကို အတင်း သင်တန်းတက်စေခဲ့ပါတaယ်….
ဒါပေမဲ့ သူသိတဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ကျခဲ့လေပြီ…ရောဘတ် တယောက်အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဆိုတာ အခုပဲ ဒေါင်းသာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ…..…..ကျောက်သင်ပုန်းဆိုတာ မြေဖြူနဲ့ရေးမှ ထင်းခနဲ ကွင်းခနဲ မြင်ရတာ…